ဓမ္မန္တရာယ် အစစ်အမှန်မှာ ဒုစရိုက်သမား | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် ဓမ္မန္တရာယ် အစစ်အမှန်မှာ ဒုစရိုက်သမား
အဓမ္မအပေါ် ဓမ္မက လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် သဘာဝ၏ အာနုဘော်အရ ပွင့်ထွန်းလာသည်။
(ဦးရွှေအောင် ရေးသည့် “ဗုဒ္ဓ – လောကသားတို့၏ အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင်” စာအုပ်မှ)
အဓမ္မသည် ဒုစရိုက်တရား ဖြစ်သည်။ လောက၏ ကောင်းကျိုးများကို ပိတ်ဆို့ ဟန့်တား ဖျက်ဆီးပြီး မကောင်းကျိုးများကိုသာ ဖြစ်ထွန်းပွားများစေသည့် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု ဖြစ်သည်။ အတ္တ လွန်ကဲမှု ကြောင့် ဖြစ်ရသည်။
အဓမ္မ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ ဓမ္မ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသည် သုစရိုက်တရား ဖြစ်သည်။ လောက၏ ကောင်းကျိုး များကိုသာ ကျင့်ကြံအားထုတ်စေသည်။ လောကကောင်းကျိုးအတွက် မကောင်းသည်များကို တားမြစ်သည်။
လူ့လောကတွင် အဓမ္မသည် မည်မျှပင် အားကောင်းစေကာမူ သဘာဝ၏ အာနုဘော်အရ ဓမ္မက တုန့်ပြန်သည်။ လွှမ်းမိုးအောင် အားထုတ်သည်။ မည်သည့်အခါမှ အရှုံးမပေး။ လူ၌ ထိုသို့အားထုတ် တတ်စေသော သဘာဝက အလိုလိုရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။ ကာလ-ဒေသ-ပယောဂ သုံးပါး ပြည့်စုံလျှင် ပြန်လည်တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူသည်။
လူတို့သည် မိမိတို့ လေ့လာတတ်မြောက်ပြီးသော အရည်အချင်းများအရ လှုံ့ဆော်မှုကို ဖန်တီး ပေးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်တတ်သည့် သဘာဝ ရှိသည်။ ထိုပတ်ဝန်းကျင်က တဖန် လူတို့အား လူမှန်းသိစမှပင် သုစရိုက်တရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်တတ်အောင် အစဉ်တစိုက် လှုံ့ဆော် ပေးသည်။ ထိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို မည်သည့်အခါမှ ပိတ်ဆို့ဟန့်တား ဖျက်ဆီး၍မရ။ လမ်းကြောင်းလွဲ၍ မရ။
လူ၏အသိဥာဏ်များက ပိုမိုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူ့ယဉ်ကျေးမှုများလည်း ပိုမို ထွန်းကားလေရာ ပတ်ဝန်းကျင် လှုံ့ဆော်မှုများလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူတိုင်းပင် သုစရိုက်တရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်မိကြသည်။ အားထုတ်မှုကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ ဒုစရိုက်တရားကို လက်မခံနိုင်ပဲ ရှိနေတော့သည်။ ဤသည်မှာ လူ့သဘာဝ၏ တန်ခိုး စွမ်းပကား ဖြစ်သည်။
သို့သော် လူ၏ပင်ကိုယ်သဘောအရ အတ္တကြီးမားသည်။ ယင်းသည် ဒုစရိုက်တရားများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အခြေခံအကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။
အတ္တကြီးမားသူတို့သည် ငယ်စဉ်ကာလက သုစရိုက်တရားကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနေနည်းခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ငယ်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းခဲ့လင့်ကစား ကြီးပြင်းလာသော အခါ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးဘဝတွင် ကျင်လည်နေရသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့တည်းမဟုတ် သုစရိုက်တရားကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း၊ ကျင့်ကြံအားထုတ် (တာဝန်ယူ)ရမှန်း မသိသေးသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့တည်းမဟုတ် အသိဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိမ်းချော်နေသဖြင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော ခေတ်ကာလ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီ တန်းတူမလိုက်နိုင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အတ္တကြီးမားသူသည် မိမိကိုယ်ကို “သောက” ဖြစ်စေသူသာ ဖြစ်သည်။ သူ၏ လိုချင် တပ်မက်မှု၊ မနာလိုမှု၊ သဝန်တိုမှု၊ သဒ္ဓါတရား ခေါင်းပါးမှုများက သူ့ကိုယ်သူသာ “သောက” ဖြစ်စေသည်။ ပရိဒေဝမီး တောက်လောင်နေစေသည်။ ချမ်းသာခြင်း အစစ်အမှန်ကို မဖြစ်စေနိုင်ပဲ ရှိနေသည်။
အတ္တကြီးမားနေသရွေ့ လောဘဇော မသတ်နိုင်။ ရပြီးရင်း ရချင်နေသည်။ ရပြီးသည်များ ဆုံးရှုံးရမှာကို နှမြောနေသည်။ သင်္ခါရကို တွန်းလှန်ချင်စိတ် ဖြစ်နေသည်။ ဤသည်မှာ ဓမ္မကို တွန်းလှန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူခံစားရသည့် သောကများကြောင့် အတ္တသမားသည် ဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ရန် အသင့်ဖြစ်နေတော့ သည်။ တဖန် ကျူးလွန်ခဲ့သည်များကို တုန့်ပြန်ခံရမည်စိုးသောကြောင့် ဒုစရိုက်နည်းဖြင့်ပင် ကာကွယ်ရန် အားထုတ်နေမိပြန်သည်။
ဒုစရိုက် ပြုမိခြင်းကြောင့်၊ တနည်းအားဖြင့် “အဓမ္မ” ပြုမိခြင်းကြောင့် သူ့တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်များ အလိုလို ရှိလာသည်။ သူ့အား တိုက်ခိုက်မည့်သူများ ရှိလာသည်။ တိုးတက်ယဉ်ကျေးလာသော လူ့သဘာဝက ပေးသည့် “ဓမ္မ အမွေ”ကြောင့် အဆိုပါ ဒုစရိုက်သမားအား ဆုံးမပဲ့ပြင် တားဆီးထိန်းသိမ်းသူများ ရှိလာရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုစရိုက် ပြုမိခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ချမ်းသာခြင်းကား အစစ်အမှန် မဟုတ်။ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကြောင့် ဓနအင်အား တိုးပွားနိုင်သည်။ အဆောင်အယောင်၊ ရာထူး မြင့်မြင့်မားမား ရထားနိုင်သည်။ အကာအကွယ်ကောင်းကောင်း ရထားနိုင်သည်။
သို့သော် တချိန်တည်းမှာပင် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် “သောက”များကို သူကိုယ်တိုင်က ယူထားမိနေသောကြောင့် ချမ်းသာခြင်း အစစ်အမှန်ကို မရနိုင်ပဲ ဖြစ်နေရတော့သည်။
Written by Lwin Aung Soe October 20, 2008 at 2:54 pm
« World focus on Burma (20 October 2008)
World　focus on Burma (21 October 2008) »
Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Posts	တခုလပ်တယောက်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်များ	မဲဆောက် မြန်မာပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများဘဝ တစေ့တစောင်း (1) English Section
Mizzima (Burmese)မြန်မာအသင်းနှင့် ထိုင်းအသင်းတို့ ပွဲပြီးနောက် နည်းပြများရဲ့ ပြောစကားများ December 4, 2016မြန်မာပြည်တွင်းရေးအား ဖိအားပေးသော မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကို မျိုးချစ်သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ December 4, 2016 မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို တိုင်တန်းသူများအား စစ်ဆေးပြီးသော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်ကိုစစ်ဆေးရန် ညှိနှိုင်းနေ December 4, 2016ရိုဟင်ဂျာတွေအား မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရပ်တန့်ပစ်ရမည် ဟု မလေးရှားဝန်ကြီး ပြော December 4, 2016ရုပ်ရှင်မင်းသား Benedict Cumberbatch က ရှားလော့ခ် စီးရီးထုတ်လုပ်သူ Vertue အား ရုပ်သံထူးချွန်ဆု ပေးအပ် December 4, 2016လိင်တူချစ်သူများ အခွင့်အရေးအတွက် လေဒီဂါဂါ က ထောက်ခံအားပေးမည် December 4, 2016မွတ်စလမ်များကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြရန် UMNO နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၌ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ် က တိုက်တွန်းနှိုးဆော် December 4, 2016အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာနိုင်ကြောင်း တောင်သူများကို မိုးဇလပညာရှင် ဦးထွန်းလွင် သတိပေး December 4, 2016 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမွန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေ ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးမည်မြောက်ဦးနဲ့ မြေပုံက မွတ်ဆ လင်တွေနဲ့ ရခိုင်ကော်မရှင် တွေ့ဆုံဆန္ဒပြပွဲကို မလေးဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်မှု အစိုးရကန့်ကွက်ရခိုင်ပြဿနာ ကိုင်တွယ်မမှားဖို့ အမေရိကန် ပြောကြားလူမျိုးတုန်းအောင်လုပ်ဆောင် ဟု မြန်မာကို မလေးရှား ပြောကြား Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)Oakland officials say the warehouse where fire broke out is death trap December 4, 2016Singapore minister warns IS will target Southeast Asia December 3, 2016Co-operative Bank to issue JCB debit card in Myanmar December 3, 2016Union Minister calls for Northern Alliance – Burma members to be declared terrorist organisations December 3, 2016Activists reject Myanmar’s new Rakhine body as Annan visits December 3, 2016Indonesian Muslims protest against Christian governor December 2, 2016What has China done during the military conflict in Northern Myanmar? December 2, 2016‘Social inequality is big in Ayeyawaddy Region’ December 2, 2016 BBC (Burmese)သမ်မတအိုဘားမား ကုလညီလာခံမှာ IS အန်တရာယျ ပွောမွနျ​မာ့​စီးပှား​ရေး​ဖို​ရမျ USကငျြးပပွငျ​သဈ​တဈ​ဦး အသတျ​ခံ​ရ​တာ အတညျ​ပွု RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldFar-right rejected in Austrian presidential election December 4, 2016Anti-immigration candidate Norbert Hofer calls for unity in Austria after an apparent clear loss to independent Alexander Van der Bellen.Crucial constitutional vote for Italy December 4, 2016Italians on Sunday are casting their ballots inacrucial constitutional referendum that could drastically change the political landscape of the eurozone's third-largest economy.Opinion: First Brexit, then Trump, now Italy? December 2, 2016The world as we know it could come to an end this Sunday. Or it could be just another day. It depends on whom you talk to.How populism could shake up Europe December 4, 2016Energized by President-elect Donald Trump's victory, Europe's populist movements are on the cusp of sweeping far-right, nationalist and euroskeptic parties into power across the continent inaseries of upcoming elections.CNN inside Aleppo during airstrikes December 4, 2016Nineteen people were killed in airstrikes in the northwestern Syrian province of Idlib on Sunday, the Aleppo Media Center activist group said, as government forces kept pounding the neighboring city of Aleppo to try to retake it from rebels.Finland shooting:3women killed with rifle December 4, 2016The leader ofalocal city council and two journalists were shot dead in an attack outsidearestaurant in Finland, police said.Fidel Castro's ashes get 'simple' interment December 4, 2016Fidel Castro's remains were laid to rest Sunday morning inaprivate ceremony in Santiago de Cuba, the city where he launched his communist revolution, Cuban officials told CNN.S. Korean President gets ultimatum December 3, 2016Embattled South Korean President Park Geun-hye faces an ultimatum from her own party: Announceatimeline for her resignation or face possible impeachment. IPS Top newsG77 Reiterates Call for IMF Reforms & Equitable Voting Power December 4, 2016G77 Introduces 13 Draft Resolutions on the UN’s Development Agenda December 4, 2016Pakistan and India Unlikely to Move to All-out War: Musharraf December 3, 2016Civil Society On Aleppo: UN General Assembly Must Act December 2, 2016Managing Diversity December 2, 2016Unleashing Africa Full Potential December 2, 2016Fidel Castro: The Revolutionary Outlived His Revolution December 2, 2016UN “Profoundly Sorry” for Haiti Cholera Outbreak December 2, 2016Meta	Register	Log in